Employment Somali | Portland Public Library
Shaqo ka banaan Maktabada Dadweynaha Portland (PPL, Portland Public Library)
Maktabadda Guud ee Portland waa loo-shaqeeye bixiya fursaddo shaqo oo loo siman yahay una heellan inu qof walba siyo helintaanka ilo waxbarasho iyo dhagan oo la hubo lacag la’aan na ah. PPL waa hay’ad dhaqameedka ugu booqashada badan Maine waana hanti bulsho oo qiimo leh, oo u adeegta deganayaasha iyo booqdayaal in ka badan 150 sano.
PPL waxay jawi soo dhawaynleh ku bixisaa ilo la wadaago oo bilaash ah – buugaag, filim, taariikh, fikrado waaweyn – si loo kobciyo xidhiidh macno leh iyo isbeddel togan ee magaaladeena firfircoon. PPL waxa ay aaminsantahay in aanu sii xoogaysanayno hadba inta aan shaqadeena iyo agabkeena ku toosino sinnaanta, helitaanka, ka mid noqoshada, iyo matalaadda khibradaha iyo aragtiyaha kala duwan. Si loogu guulaysto xubin ka noqashada kooxda Maktabada waxa loo baahan yahay in daacad loo noqdo arrimaha sida xiisaha, ka-qaybgalka, iskaashiga, iyo hal-abuurka. Waxaan si xamaasad leh kuugu martiqaadaynaa inaad dalbato shaqadaan.
PPL waxaa ka go’an inay shaqaaleysiiso oo ay ilaaliso shaqaale kala duwan oo aqoon sare leh si loo xaqiijiyo aragtiyo ballaaran, korna loogu qaado sinnaanta iyo ka mid noqoshada, lona hirgeliyo isku xirka bulshadeena baaxada weyn leh. Codsadayaasha leh aqoonsiyo isir, jinsi, ama dhaqan kala duwan ayaa lagu dhiirigelinayaa inay shaqadaan codsadaan.
Boosaska hadda la heli karo »